Gegida Diyaaradaha magaalada Baraawe – Maalgelin Mise Musuq ? !! | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Gegida Diyaaradaha magaalada Baraawe – Maalgelin Mise Musuq ? !!
Iyadoo weli uu muran badan ka taagan yahay kharashka ku baxay dhismaha gegida diyaaradaha Baraawe, ayaa waxaa durbadiiba soo ifbaxay burbur ku dhacay garoonka. Burburkaas oo loo aaneeyey roobab hordhac uu ahaa xilli Gu’ga ee sanadkan 2020-da.
Baraawe waa magaalammadaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waana magaalo qadiim ah oo leh ilbaxnimo durugsan, isla markaana qiimo weyn u leh dalka Soomaaliya. Waxaa jira su’aalo ku gadaaman mashruuca dhismaha garoonka Baraawe, iyo doorka dowladda Soomaliya ku laheed hirgelintiisa!
Haddaba maqaalka waxaan diiradda ku saaraynaa marxaladaha uu soo maray mashruuca laga billaabo fikraddisa hore, hindisiihiisa iyo naqshadayntiisa (Its design and blueprint), fulintiisa iyo kormeerkiisa farsamo (Execusion and supervision), iyo dabcan maalgelintiisa iyo maamulkiisa, si akhristaha uu helo macluumaadka lagama maarnaka ah oo ussurtaggelinayso inuu iskiisa u qiimeeyo, una garto dhabta mashruuca.
Safiirka Midowga Yurub (EU) ayaa u sheegay wakiillo beesha caalamka iyo Ra’iisul wasaaraha oo ka qaybgalay furitaanka gegida, inuu mashruuca ku kacay lacag dhan 4.5 malyan doolar, taasoo gebigeedba uu bixiyay Midowga Yurub, lana soo mariyay Sanduuga Xasilinta Soomaaliya (Somali Stability Fund— SSF).
Dad badan ayaa is weydiinaya, sidee buu ku dhacay fashilka baaxadan gaarsiisan? Yaa ka mas’uul ah? Halkee buu ku dambaysay la dagaallanka musuqa iyo hufnaanta ay dowladaha yurub calanka u sideen?
Wixii ka horreyay 2012-kii, Dowladda Federaalka lagalama tashan jirin hab-isticmaalka lacagta deeqda ah, iyo mashruucyada lagu bixiyo. Balse, xukuumadda waxay bilowday inay fikraddeeda ka dhiibato habka ku habboon in loo maamulo deeqda, taas oo ahayd wax u eg isla xisaabtan.
Dowladda ayaa hirgelisay in barta internetka lagu soo bandhigo mashuurcyada ay hay’adaha caalamka ka hirgeliyaan waddanka, si ay muwaaddiniinta ula socdaan, nasiibdarro barta waxay ku qoran tahay af qalaad (Somalia Aid Information Management System – Somali AIMS: http://aims.mop.gov.so/home).
Walow Wasaaradda Qorshaynta iyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ay u xilsaaran yihiin iskuduwidda deeqaha waddanka soo gala oo dhan, haddana waxaa xusid mudan, in lacagaha deeqaha ah dalka dibeddiisa laga maamulo.
2016-kii ayaa Soomaaliya waxay ka heshay deeq bixiyeyaasha lacag dhan 1.3 bilyan doolar oo loogu talaggallay in lagu bixiyo: (a) kaalmo bini’aadannimo ah 588 malyan doolar; iyo (b) kaalmo horumarineed 692, malyan doolar. Waxaa xusid mudan in xisaabtan ka maqan tahay kharashka nabad-ilaalinta oo gooni loo bixiyo.
Warbixn ka soo baxday Xafiiska Ra’iisul-wasaaraha ayaa sheegaysa in lacagta intaa dhan sanduuqa dowladda dhexe ay soo martay 8% (boqolkii sideed) oo u dhigantay 50.4 malyan doolar, inkastoo horey “Geeddisocodka Nidaamka Waddanka – Country Systems Road Map”, laysku afgartay in 15% (boqolkii shan iyo toban) lagu soo shubo xisaabta Wasaaradda Maaliyadda.
Ka madax-adayga Hay’adaha Samafalka Caalamiga wareejinta maamulka deeqaha waa arrin xasaasi ah. Sida uu qorey Paul Okumu, 97.9% deeqaha waxay Deeq-bixiyeyaashu gacanta ugu shubaan Hay’adaha Samafalka Caalamig, waana mida keentay in madaxda hay’adahaas mushaarkoodu 11.6 jeer uu ka badnaado kan maxalliga ah (Africa Platform On Governance, Responsible Business and Social Contract).
Mashruuca Baraawe waxaa asaskiisa dhagaxa dhigay bishii Agoosto 2015, madaxwaynaha Maamul-Goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo ay wehliyeen wufuud ay ka mid ahaayeen hay’adaha maalgeliyay mashruuca, madaxda ciidanka AMISOM iyo saraakiil dowladda ka tirsan. Garoonka waxaa loo asteeyay in laga dhiso goob u jirta masaafo dhan 4 km deegaanka Imbareesa laguna magacaabo Buunqab (VOA, 13 Agoosto 2015).
Haddaba, su’aashu waxay tahay, waa maxay Sanduuga Xasilinta Soomaaliya (SSF)?
Sanduuqa “Somali Stability Fund— SSF” wuxuu ka mid yahay sanduuqyada deeqaha lacagta loogu soo ururiyo Soomaliya sida “African Development Bank Somali Infrastructure Fund, The Global Fund, UN Multi Partner Trust Fund, UN Peacebuilding Fund, World Bank Multi-Partner Fund, WB State- and Peace-building Fund.” Dowladda Ingiriiska (UK) ayaa soo jeedisay in Soomaaliya loo aasaaso sanduuq deeqaha lagu soo uruuriyo, 2012-kii. Sanduuqan waxaa maalgeliya dowladaha ay ka mid yihiin UK, Denmark, Netherlands, Sweden, Norway, UAE iyo ururka Midowga Yurub (EU).
Sanduuqa (SSF) waxaa maamuusha shirkadda Adam Smith International, oo laga leeyahay dalka Ingiriiska, iyadaana maamulaha guud u magacawda. Ujeeddada loo aasaasay sanduuqan ayaa ahayd in laga kaalmeeyo Soomaliya dhinacyada horumarinta nabadgelyada iyo xasilloonida, si Soomaaliya u hesho amni waara. Sanduuqa wuxuu maalgeliyey ilaa hadda 78 marshruuc oo ku kala firirsan 58 degmo.
Sanduuqa (SSF) wuxuu Koonfur Galbeed ka hirgeliyay 12 mashruuc oo uu ka mid yahay dhismaha gegida diyaaradaha ee Baraawe. Hay’adda Adam Smith International ayaa waxay qandaraas ku siiyey shirkad Japan ah oo lagu magacaabo Kenstsu Kaithatsu Consulting Ltd, taas oo samaysa naqshadaha garoonnada diyaaradaha. Sameynta naqshadda waxaa ku lug lahaa Injineer John Mukabi oo u dhashay dalka Kenya oo malaha u shaqeynayay shirkadda Japan. Dhererka gegida dayaarada ku cararto (runway) ayaa ah 2.4 km sida ku cad naqshada.
Abril 2016, ayaa Kenstsu Kaithatsu Consulting ku soo bandhigay Nairobi naqshada, iyadoo uu matalaayey Injineer Collin Ochieng. Waxyaabaha la yaabka leh oo ay naqshaddu xusayso waxaa ka mid ah in garoonka loogu talaggalay inuu xamili karo diyaarad mug weyn sida Boeing 737-800 ama mid la’eg Airbus A320-300. Walow, ay macquul tahay in jurmiga gegida xamili karo dayaaradahaas, balse dhererka gegida kuma filna inay ku soo degaan ama ka duulaan diyaaraddaha B737. Shirkaddu waxay kaloo ay soo bandhigtay sawirro muujinaya inay hawsha hordhaca ahayd bilaabatay.
Qandaraaska waxaa wax ka helay shirkad la yiraahdo Huduma Consulting Ltd oo saldhiggeedu yahay Nairobi uuna leeyahay nin Soomali ah lana aasaasay 2014. Shirkaddaas oo ay u shaqeeyaan injineerro Kenyaan ah oo aan lahayn khibrad ku filan sida Injineer Collin Ochieng’ -oo dhameeyey Jaamacada Nairobi 2017-kii- iyo kuwa la mid ah ayay ka hawlgelisay dhismaha garoonka Baraawe.
Sanad ka dib bandhigga naqshadda, ee 22-kii June 2017, ayaa Madaxwayne Shariif Xasan maamulkiisa wuxuu heshiis la galay shirkad la yiraahdo Frontier Services Group (FSG) oo uu leeyahay Erik Prince (Reuters June 22,2017). Eric Prince waa milkiilahii hore iyo aasaasaha shirkadda amni-sugidda (Security) ee Blackwater oo ku laysay Ciraaq rayad fara badan, waana nin mar waliba ka dhexmuuqda fadeexooyin. Mr. Prince waa Betsy DeVos, Wassiradda Waxbarashada Maraykanka.
Shirkadda FGS ayaa wargayska Reuters u sheegtay in ay ka taakulayn doonto dhanka isgaarsiinta dhulka, diyaaradaha iyo amaanka mashruuca garoonka Baraawe. Waxaa xusid mudan, in Shariif Xasan uu u saxiixey Shirkadda FGS inay wakiil uga noqoto dhismaha maalgashiga Dekkeda Aagga Xurta ee Koonfur Galbeed.
Waxaa si cad usoo ifbaxaysa inay aad u adag tahay in Dawladda Soomaaliya iyo Hay’adaheedaba ay dabaggal iska daaye, xitaa gartaan sida ay wax u socdaan (Transprancy). Waa sidii silsilad taxan oo unug kasta uu cad ka mid ah deeqda rujisanayo.
Hadabba su’aasha taagan ayaa ah, cashar intee le’eg ayay Soomaalida ka baran kartaa mashruuca garoonka Baraawe?
Soomaalida ayaa waxay ku maahmaahdaa “Maskiin ayaa leh misko la fuulo”. Waxaa cad in sanad walba Soomaaliya lagu sumcad dilo fagaarayaasha caalamka, laguna tilmaamo dal ay la degtay musuqmaasuq iyo maamul xumo, iyadoo ay muuqato in hay’ada “Transparency International” qudheeda ay indhaha ka qabsato musuqa ka jira Hay’adaha Samafalka Caalamiga!
W/Q Cusman Maxamed Xussen iyo Cabduqaadir Cariif Qaasim
Abdi Malik 45 mins ago
DHAGEYSO: Madaxweyne Qoor qoor Oo Ujawaabay Hanjabaadii Sheekh Shaakir
Madaxweyne Farmaajo oo Daah furay Barnaamij cusub oo taakuleyn ah (Daawo Sawirada)
Villa Somalia oo ka hadashay dacwadda la sheegay inay ka gudbisay weriye Gurbiye
Wararkii UDambeeyey Dhisme Ku Dumay Gudaha Muqdisho Oo Dad Ku Le’deen
Madaxweyne Farmaajo oo Daah furay Barnaamij cusub oo taakuleyn ah (Daawo...